Semvura yechokoreti: Laura Esquivel's bestseller | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Vanyori, Mabhuku, Romance novel
Semvura yeChocolate Ndiro basa rinozivikanwa kwazvo remunyori weMexico Laura Esquivel. Mushure mekuburitswa muna 1989, yakave yakasarudzika mumabhuku epasi rese. Iyo inoverengeka yemaruva ine mukurumbira pamusoro pemashiripiti echokwadi. Muna 2001, pepanhau El Mundo yaisanganisira iyo rondedzero mu "runyorwa rwezana zana rakanakisa enganonyorwa muSpanish yezana ramakumi maviri."
Zano yakavakirwa pahupenyu hwaTita, mukadzi anogara pakati peasinga gone rudo nekubika, uye ndiani achaenda kuburikidza nematambudziko mazhinji kutevedzera tsika yemhuri. Kutenda kune iyi nhoroondo, Esquivel ndiye wekutanga munyori wekune dzimwe nyika mu kuhwina mukurumbira ABBY mubairo, muna 1994. Kubva payakaburitswa pari zvino, basa iri rakatengesa makopi anodarika mamiriyoni manomwe uye rakaturikirwa mumitauro inodarika makumi matatu.
1 Pfupiso yeMvura Semvura yeKokoreti (1989)
2 Kuongororwa kwemvura yakaita chokoreti (1989)
2.2.2 Amai Elena (Maria Elena de La Garza)
2.2.6 Vamwe vatambi
3 Imwe nhoroondo yehupenyu yemunyori Laura Esquivel
3.1 Basa nzira
3.2 Zvematongerwo enyika
3.3 Zvinyorwa zvemitambo
3.4 Mabhuku naLaura Esquivel
Pfupiso ye Semvura yeChocolate (1989)
Josephite - Kana Tita, semaziviro anoita munhu wese-- ndiye gotwe pahanzvadzi nhatu. Iye ndiye chigadzirwa chemubatanidzwa pakati paMaría Elena naJuan De la Garza. Sezvo aive mudumbu raamai vake - Amai Elena - aigona kunzwika kuchema, kunyangwe pazuva rekuzvarwa kwake asati aberekwa mukicheni yemhuri yemombe. Nemazuva maviri chete ekuberekwa, Tita inherera yababa uye anova kurererwa padyo nemubiki wemba, Nacha.
Kubva paudiki kwazvo, zvakatipoteredza mairi inokura zvinoita kuti ude hunyanzvi hwekugadzirira, iyo yaanopedzisa pasi pedzidziso yaNacha. Munguva yehudiki hwake, Tita inokokwa kumhemberero; ipapo kusangana naPedro, vese vari vaviri vanowira murudo pakutanga kuonana. Nguva pfupi yapfuura - achikurudzirwa nemanzwiro ake akadzika - uyu murume mudiki anoenda kuDe la Garza mhuri Ranch, akatsunga kukumbira Mamá Elena ruoko rwemudiwa wake.
Chikumbiro chaPeter chinorambwa, sezvo, maererano netsika dzenguva, tete - Kuva mwanasikana mudiki-- anofanira kugara asina murume kuti achengete amai vake kana akwegura. Mukupikisa, Mamá Elena anomupa mukana wekuroora dangwe rake: Rosaura. Zvisingatarisirwi, murume wechidiki anotambira kuzvipira, achida kuve padyo nerudo rwehupenyu hwake.
Rimwe zuva musati maroorana, Nacha anofa. In consecuense, Tita anofanira kunge ari mubiki mutsva. Muchato unoitika uye Tita akanyura mukusuwa kwakadzika, saka kuburikidza nendiro imwe neimwe yaanopfuudza su kure kure manzwiro.
Kubva ipapo nhevedzano yezviitiko zvinoitika izvo, kunyangwe zvakawanda zvichizotarisirwa, zvichamonyoroka nekutendeuka izvo zvichashamisa vanopfuura mumwe anofarira kuverenga. Iko kushuva, kurwadziwa, kupenga netsika dzakadzika midzi yenguva, ivo vari zvimwe zvezvinhu zvinounza nyaya iyi kuhupenyu zvichibva parudo "rwakarambidzwa".
Semvura yeChocolate ...
Analysis of Semvura yeChocolate (1989)
Semvura yeChocolate Ndicho pink inoverengeka ine chiratidzo chemashiripiti. Ane Mapeji 272 uye yakakamurwa kuva 12 zvitsauko. Iyo yakagadzwa munharaunda yeMexico, kunyanya muguta rePiedras Negras de Coahuila. Iyo nyaya inotanga muna 1893 uye inovhara makore makumi mana nemana; panguva iyoyo iyo Shanduko yeMexico (1910-1917) mamiriro ezvinhu ayo anoratidzwa muchirongwa.
Pakati pezvakanaka zvebasa, munyori akamiririra zvitsauko nemwedzi yegore uye akaperekedza yega yega ine zita rechikafu chaicho cheMexico. Pakutanga kwechikamu chimwe nechimwe, izvo zvinoshandiswa zvinosanganisirwa, uye apo rondedzero ichiitika, mabikirwo acho anotsanangurwa zvakadzama. Iyo novel inoenderana neyechitatu munhu murondedzeri, ane zita rinozoburitswa pakupera kweizvi.
Iye ndiye protagonist uye main axis yenoveli, mwanasikana mudiki wemhuri yaDe la Garza uye a akasarudzika mubiki. Akave nedambudziko rinosuruvarisa rekusakwanisa kuve nerudo rwehupenyu hwake, kunyangwe vachigara mumusha mumwe chete. Kudzvinyirirwa naamai vake, anozotsvaga kupotera mune kumwe kuda, kubika. Nenzira yemashiripiti, anoendesa manzwiro ake kubudikidza nemaresiphi ake akaisvonaka.
Amai Elena (Maria Elena de La Garza)
Ndiyo amai vaRosaura, Gertrudis naTita. Icho chiri pamusoro mukadzi ane hunhu hwakasimba, anodzvinyirira uye akaomarara. Mushure mekufirwa, anofanira kunge ari iye musoro wemhuri uye achatarisira purazi iri nevanasikana vake vese.
Ndiye co-nyeredzi yeruzivo; kunyangwe pasina tariro ndichidanana naTita, Akafunga kuroora Rosaura kuti agare padyo nerudo rwake. Pasinei nenguva nemamiriro ezvinhu, manzwiro ake kuna Tita acharamba asina kugadzikana.
Ndiye anobika iro racho remhuri yaDe la Garza, uye ndiani, nekuwedzera, anoita basa rakakosha muhupenyu hwe protagonist.
Iye ndiye mwanasikana wekutanga wevaDe la Garza vaviri, mukadzi wechidiki wemitemo netsika, uyo anofanirwa kuroora Pedro nekuraira kwamai vake.
Munyaya yese nyaya vamwe vanhu vanodyidzana ndiani anozopedzisira apa kupa kubata kwakanangana nechikamu. Pakati pavo tinogona kuratidza: Gertrude (Hanzvadzi yaTita), Chencha (Musikana waTita uye shamwari) uye Jhon (chiremba wemhuri).
Iye munyori akaroora director director Alfonso Arau kubva muna 1975 kusvika 1995, iyi yaive iyo Manager ita iyo firimu inoenderana nanovel. Laura iye amene aive achitarisira kunyora iyo firimu, pamwe nekubatana kwemurume wake. Iyi firimu yaive yakabudirira kwazvo kubvira payakatanga kuratidzwa muna 1992, iine 100% yekugadzirwa kweMexico, yakapihwa nemitambo gumi yeAriel uye anodarika makumi matatu shanduro.
Iyi firimu yakaramba iri pakati peye yakanyanya kukoshesa cinema yeMexico kwemakumi emakore. Akasarudzwa kumubairo wakakosha, senge: Goya neGolden Globe Awards muna 1993. Asi, hazvisi zvese zvaive zvakanaka: muna 1995 munyori akamhan'arira murume wake wekare nekumusainira gwaro (muChirungu) mugwaro rekurambana. akasiya kodzero dzenhoroondo. Pakupedzisira, munyori weMexico akakunda kutongwa.
Imwe nhoroondo yehupenyu yemunyori Laura Esquivel
Munyori Laura Beatriz Esquivel Valdés akaberekwa Cuauhtémoc (Mexico), neMugovera Gunyana 30, 1950. Iye ndiye mwanasikana wechitatu wemuchato pakati paJoseph Valdés uye muterevhizheni Julio Esquivel. Muna 1968, akapedza kudzidza seBachelor yeEkutanga Yevacheche Dzidzozvakare akadzidza Theater uye Dramatic Creation muchikamu chevana kuCADAC (Mexico City).
Kubva 1977, anga ari mudzidzisi mumusangano dzakasiyana siyana theatre, script kubvunza uye kunyora lab, mumaguta akasiyana eMexico neSpanish. Kwemakore gumi (10-1970) akanyora zvinyorwa zvakasiyana siyana zveMexico zvirongwa zveterevhizheni zvevana. Muna 1980, akaita madhora ake munzvimbo yemabhaisikopo pamwe nekugadzirwa kwechinyorwa chemufirimu: Chido Guan, El Tacos De Oro.
Kubva 2007 akapinda mune zvematongerwo enyika; gore rakatevera akange ari General Director wetsika muCooacán kusvika 2011. Iye chikamu chemubati waMorena (National Regeneration Movement), ne iyo yakasarudzwa muna 2015 semutevedzeri wemubatanidzwa weCongress of the Union kuMexico.
Muna 1989, akaburitsa bhuku rake rekutanga, rakanzi Semvura yeChocolate. Kutevera kubudirira kweiri bhuku, munyori akaburitsa dzimwe pfumbamwe nhoroondo kubva muna1995 kusvika 2017, mune zvinotevera kumira pachena: Nokukurumidza sekuda (2001), Malinche (2005), Dhayari raTita (2016) y Yangu nhema nhema (2017); aya maviri ekupedzisira anopedzisa trilogy Semvura yeChocolate.
Mabhuku naLaura Esquivel
Semvura yeChocolate (1989)
Dhayari raTita (2016)
Yangu nhema nhema (2017)
Mutemo werudo (1995)
Yepedyo inotapira (nyaya) (1998)
Nyeredzi yegungwa (1999)
Bhuku remanzwiro (2000)
Nokukurumidza sekuda (2001)
Lupita aifarira kuayina (2014)
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Romance novel » Semvura yeChocolate